1 Ihe E Mere 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 1:1-54
1 Adam,+Set,+Inọsh,+ 2 Kinan,+Mahalalel,+Jered,+ 3 Inọk,+Metusela,+Lemek,+ 4 Noa,+Shem,+ Ham+ na Jefet.+ 5 Ụmụ Jefet bụ Goma na Megọg+ na Medaị+ na Jevan+ na Tubal na Mishek+ na Taịras.+ 6 Ụmụ Goma bụ Ashkenaz+ na Raịfat+ na Togama.+ 7 Ụmụ Jevan bụ Elaịsha+ na Tashish,+ Kitim+ na Rodenim.+ 8 Ụmụ Ham bụ Kush+ na Mizrem,+ Pọt+ na Kenan.+ 9 Ụmụ Kush bụ Siba+ na Havila na Sabta+ na Reama+ na Sabteka.+ Ụmụ Reama abụrụ Shiba na Didan.+ 10 Kush wee mụọ Nimrọd.+ Ọ bụ ya bụ onye mbụ ghọrọ dike n’ụwa.+ 11 Ma Mizrem mụrụ Ludim+ na Anamim na Lehebim na Naftuhim+ 12 na Patrusim+ na Kasluhim+ (onye ọ bụ n’agbụrụ ya ka ndị Filistia+ si pụta) nakwa Kaftorim.+ 13 Ma Kenan mụrụ Saịdọn+ bụ́ ọkpara ya, mụọkwa Het+ 14 na ndị Jibọs+ na ndị Amọraịt+ na ndị Gegash+ 15 na ndị Haịvaịt+ na ndị Akaịt na ndị Saịnaịt+ 16 na ndị Avad+ na ndị Zemaraịt+ nakwa ndị Hemat.+ 17 Ụmụ Shem+ bụ Ilam+ na Ashọ+ na Apakshad+ na Lọd+ na Eram,Tinyere Ọz na Họl na Gita na Mash.+ 18 Ma Apakshad mụrụ Shila,+ Shila amụọ Iba.+ 19 A mụụrụ Iba ụmụ abụọ. Aha otu bụ Pileg,+ n’ihi na ọ bụ n’ụbọchị ya ka e kewara ụwa; aha nwanne ya bụ Jọktan. 20 Ma Jọktan mụrụ Almodad na Shilef na Hazamevet na Jira+ 21 na Hedoram na Yuzal na Dikla+ 22 na Obal na Abimael na Shiba+ 23 na Ofa+ na Havila+ na Jobab;+ ndị a niile bụ ụmụ Jọktan. 24 Shem,+Apakshad,+Shila,+ 25 Iba,+Pileg,+Riyu,+ 26 Sirọg,+Nehọ,+Tira,+ 27 Ebram,+ ya bụ, Ebreham.+ 28 Ụmụ Ebreham bụ Aịzik+ na Ishmel.+ 29 Ndị a bụ ndị si n’usoro ọmụmụ ha: Nebeyọt+ bụ́ ọkpara Ishmel na Kida+ na Adbiel na Mibsam,+ 30 Mishma na Duma,+ Masa, Hedad+ na Tima, 31 Jitọ, Nefish na Kedema.+ Ndị a bụ ụmụ Ishmel. 32 Ma Ketura,+ bụ́ iko Ebreham,+ mụrụ Zimran na Jọkshan na Midan+ na Midian+ na Ishbak+ nakwa Shụa.+ Ụmụ Jọkshan bụ Shiba na Didan.+ 33 Ụmụ Midian bụ Ifa+ na Ife na Henọk na Abaịda na Eldea.+ Ndị a niile bụ ụmụ Ketura. 34 Ebreham wee mụọ Aịzik.+ Ụmụ Aịzik bụ Isọ+ na Izrel.+ 35 Ụmụ Isọ bụ Elifaz, Ruel+ na Jiọsh na Jelam na Kora.+ 36 Ụmụ Elifaz bụ Timan+ na Oma, Zifo na Getam, Kinaz+ na Timna+ nakwa Amalek.+ 37 Ụmụ Ruel bụ Nehat, Zira, Shama na Miza.+ 38 Ụmụ Sia+ bụ Lotan na Shobal na Zibiọn na Ena+ na Daịshọn na Iza nakwa Daịshan.+ 39 Ụmụ Lotan bụ Horaị na Homam. Nwanne Lotan nke nwaanyị bụ Timna.+ 40 Ụmụ Shobal bụ Alvan na Manahat na Ibal, Shifo na Onam.+ Ụmụ Zibiọn bụ Eya na Ena.+ 41 Ụmụ Ena bụ Daịshọn.+ Ụmụ Daịshọn bụ Hemdan na Eshban na Itran na Kiran.+ 42 Ụmụ Iza+ bụ Bilhan na Zeavan na Ekan.+ Ụmụ Daịshan bụ Ọz na Eran.+ 43 Ndị a bụ ndị eze chịrị n’ala Idọm+ tupu eze+ ọ bụla achịa ụmụ Izrel: Bila nwa Biọ, onye aha obodo ya bụ Dinhaba.+ 44 E mesịa, Bila nwụrụ, Jobab nwa Zira+ onye Bọzra+ wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 45 E mesịa, Jobab nwụrụ, Husham+ onye si n’ala ndị Timan+ malitere ịchị n’ọnọdụ ya. 46 E mesịa, Husham nwụrụ, Hedad+ nwa Bidad, onye meriri Midian+ n’ala Moab, wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. Aha obodo ya bụ Evit.+ 47 E mesịa, Hedad nwụrụ, Samla onye Mazrika+ wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 48 E mesịa, Samla nwụrụ, Sheọl onye Rehobọt,+ nke dị n’akụkụ Osimiri Yufretis, wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 49 E mesịa, Sheọl nwụrụ, Belhenan nwa Akbọ+ wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 50 E mesịa, Belhenan nwụrụ, Hedad wee malite ịchị n’ọnọdụ ya; aha obodo ya bụ Peyu, aha nwunye ya bụkwa Mehetabel, ada Metred, bụ́ ada Mizahab.+ 51 E mesịa, Hedad nwụrụ. Ndị isi Idọm wee bụrụ onyeisi bụ́ Timna, onyeisi bụ́ Alva, onyeisi bụ́ Jitet,+ 52 onyeisi bụ́ Oholibema, onyeisi bụ́ Ila, onyeisi bụ́ Paịnọn,+ 53 onyeisi bụ́ Kinaz, onyeisi bụ́ Timan, onyeisi bụ́ Mibza,+ 54 onyeisi bụ́ Magdiel, onyeisi bụ́ Aịram.+ Ọ bụ ndị a bụ ndị isi+ Idọm.
1 Ihe E Mere 1